Series 4 kudonha kuwanikwa kwakaponesa hupenyu hwemurume muSweden | IPhone nhau
Chizvarwa chechina cheApple Watch, Series 4, chaive chimwe chezvigadzirwa izvo yakanyanya kukwezva kutariswa panguva yekutaura kwekupedzisira Nyamavhuvhu pachiitiko icho Apple yakaratidza iyo nyowani iPhone XS, XS Max uye iPhone XR, chishandiso icho kubva nhasi chiripo muApple Chitoro.
Uye ini ndinoti yakakwezva kutarisisa, nekuda kwemabasa matsva ayo aanotipa tichienzanisa nechizvarwa chakapfuura. Kune rimwe divi, ivo vakawana mukana wekuita maelectrocardiograms, basa iro parizvino rinongowanikwa muUnited States. Iyo imwe yakakura ruzivo ndeye kudonha detector.
Yekudonha detector yeApple Watch Series 4, iri pamusoro pekufonera runhare rwatakatangisa kana ve emergency services patinodonha uye hatifambe, pamwe nekuti isu hatigone kana nekuti tarasikirwa nehana.
Mashandisiro anoita iyi sarudzo inonakidza Gustavo Rodríguez akazviongorora muSweden. Sezvo isu tichigona kuverenga mune yeSweden yepakati Aftonbladet:
Gustavo, 34, akakuvara musana musana ndokudonha akaoma mutezo kukicheni pasi. "Zvakaita sekunge mumwe munhu andisungirira banga kumusana," anodaro. Neraki, wachi yake yakapindura.
NeChishanu, Gustavo Rodríguez akamira pachitofu semazuva ese ndokubika chikafu. Pakarepo akanzwa kusagadzikana kusinganzwisisike kumusana kwake uye zvakawedzera kuoma kufambisa muviri wake. Gustavo akaedza kusafunga nezvazvo. Asi ndakazofambisa pani ndikaziva. Ndainzwa sekunge munhu akandinamatira banga kumusana, anodaro Gustavo.
Akawira pasi. Marwadzo acho aive akasimba zvekuti zvese zvakashanduka kuita nhema. Akatadza kufamba. Ipapo wachi yakachaya iye ndokubvunza, "Iwe unoda kufonera here 112?" "Apple Watch yangu yanga yanzwa kudonha uye yanga ichinetseka kana ichifanira kufona nekukurumidza," akadaro Gustavo.
Kuonekwa kweApple Watch kudonha Inogonesa paChikamu 4 chevatengi vane makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa kana zvimwe, kunyangwe iwe uchikwanisa kuimisikidza nemaoko kuburikidza neiyo iPhone Clock application kana iwe uri pasi pemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa (kunyangwe Apple ichinyevera kuti chimwe chiitiko chinogona kuvhiringidzwa nemadonhwe mune anoshanda vatengi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Series 4 kudonha kuwanikwa kwakaponesa hupenyu hwemurume muSweden
Uye nekuda kwekukuvara musana iyo wachi "yakachengetedza hupenyu hwako"? ko chii chaaifira ipapo chaizvo?
Ok uye kana ndisingazive uye wachi inodana pavanopindura ndiani achataura kuzivisa zvinoitika kwandiri
Uye chii chaunoda? kuti wachi inokupa rubatsiro rwekutanga uye inokuendesa kuimba yekukurumidzira? mirira mashoma makumi emakore, zvave zvakakwana kuti uone kuti wadonha, fungidzira kuti marwadzo ekumusana aisazomutendera kuti asimukire futi uye angadai akarova musoro wake uye aibuda ropa kusvika pakufa, haufunge kuti wachi ingadai aponesa hupenyu hwake?
Uku kwave kuri kuvhurwa kweiyo iPhone XR muPuerta del Sol